आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कने छटपटी - कारोबार - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कने छटपटी
निजी क्षेत्रलाई साना कलकारखानामा लगानी गर्न प्रोत्साहन
दीपक भट्ट चैत १६
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाल स्वेतपत्र जारी गर्दै देशलाई आयतमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन प्रयास गर्ने बताएका छन्। श्वेतपत्र जारी गर्दै उनले आगामी दिनमा सामान आयातको करले देश चलाउने अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन लगानी केन्द्रित गर्ने जानकारी दिए।
सरकार बैदेशिक लगानी ठूला आयोजना केन्द्रित रहने उनले स्पष्ट संकेत गरेका छन्। नेपालका निजी क्षत्रेले साना उत्पादनमुक उद्योग कलकारखानामा लगानी गर्नु पर्ने डा.खतिवडाको भनाइ थियो। नेपालले नेपालको अन्तरिक उत्पादनमा केन्द्रित गरेर अघि बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले वैदेशिक ऋण लिनसक्ने उनले बताए। ‘त्यसका लागि निजी क्षेत्रले समेत आफ्नो स्तरबाट विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ’, डा.खतिवडाले भने, ‘स–सना परियोजनामा वैदेशिक सहयोग लिँदैनौं।’
राष्ट्रियहितभन्दा लगानीकर्ताका चाहनामा आउने योजनाहरुमा सरकारले ध्यान दिने उनले जनाए। ‘विदेशीको योजनाभन्दा पनि हाम्रो योजनामा पैसा भित्र्याउनुपर्छ’, उनले भने। श्वेतपत्र जारी गरेपछि अर्थमन्त्रालयमा अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उदारीकरणका नाममा भन्सार दरबन्दीहरु घटाइएको तर आन्तरिक राजश्वको श्रोत खोज्न भने असफल भएको सुनाए। कर प्रशासनले राजश्वको नयाँ स्रोत खोज्न कुनै कसरत नगरेको आरोप उनले लगाए।
सम्बन्धित समाचार : नेपालले २८ वर्षदेखि अपनाएकाे अर्थनीति असफल भएकाे ठहर
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे। भ्याटको सिद्धान्त र अभ्यास विपरीत मनोगत रुपमा कतिपय वस्तुहरुको बिक्रीमा संकलन हुने कर व्यवसायीलाई फिर्ता दिने व्यवस्थाले वार्षिक करिब ५ अर्बभन्दा बढीको राजश्व गुमाउनु परेको डा. खतिवडाको भनाइ थियो।
कर छुटको प्रभाव सन्दर्भमा कुनै ठोस अध्ययन र विश्लेषण हुन नसककोले पनि देशले घाटा व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।
स्वेतपत्र अनुसार भ्याट लाग्ने वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा विद्युतीय प्रणाली इ–बिलिङ लागू गर्न सकिदैन। मूल्य अभिवृद्धि करमा कर कट्टी लिनका लागि खरिद बिलको दुरुपयोग हुने गरेको र झुठा बिल प्रयोगकर्ता्विरुद्ध कर प्रशासन सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचार : सेयर बजारभन्दा पर्यटन, कृषिमा लगानी केन्द्रित गर्न अर्थमन्त्रीको सुझाव (भिडियाे)
भारत र चीनबाट फाइदा लिन असफल
स्वेतपत्रमा आगामी ५ वर्षमा मुलुकको चरम गरिबीलाई शून्यमा झार्ने अठोट मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ। एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतबाट बढ्नु दुःखद भएको उनले बताए। विश्वका दुई विशाल अर्थतन्त्रहरु चीन र भारतबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेको उनको निष्कर्ष छ।
व्यापारघाटा मुख्य चुनौती : अर्थविद्
श्वेतपत्रमा उल्लेख भएको आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट मुक्त गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य हासिलको विषय सहज नहुने अर्थविद्हरुले जनाएका छन्। अर्थविद् डा.मदनकुमार दाहालले श्वेतपत्रमा राखिएको लक्ष्यअनुसार सरकार आत्मनिर्भरतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
‘बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार्नुपर्ने चुनौती छ। अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर आउन व्यापारघाटा कम गर्दै आयातमुखीबाट निर्यातमुखी हुनुपर्छ। यो नै अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती हो’, नेपालखबरसँग उनले भने।
अर्का अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले श्वेतपत्रमा उल्लेखित लक्ष हाँसिल गर्न आगामी दिनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए। ‘पहिलो सर्त भनेको व्यक्तिगत आयमा सुधार हुनुपर्छ। त्यसका लागि नेपाली वस्तुको उत्पादन बढाउन अत्यन्त जरुरी छ। विकरला व्यापार घाटालाई कसरी घटाउने योजना आउँछ धेरे कुरा त्यसमा भर पर्नेछ’, उनले भने।
श्वेतपत्रकाे पूर्ण पाठ
प्रकाशित १६ चैत २०७४, शुक्रबार | 2018-03-30 21:48:07